allsanaag.com - Cabdi Jamaal oo bilad geesi la gudoonsiiyey
Laascaanood waxay xukunka Isaqland ama Soomaaliyadiid ku dhacday 15-10-2007. Waxay dulmi ku jirtay:	3205	Days	08	Hours	41	Minutes	19	Seconds	Horjoogaha Soomalidu Ma Danaystaa? Ma Daryeelaa?
Cabdi Jamaal oo bilad geesi la gudoonsiiyey
Written by khalid	Daawo Daraawiishta iyo madaxda Puntland oo si heer sare ah loogu soo dhoweeyey Degaanada Maakhir.
HADDII AANAN DHULKAYAGA PUNTLAANDOW
Hoos ka daawo geesiyadii Puntland ee u diiday in jabhada SNM iyo Marabidoodu iney soo caga dhigtaan degaanada Maakhir
NACABKAYAGAAN GARANAY...IS ILAALIYAAN BARANAY..DAD IS AAMINAAN NOQONAY..
Waxaa dhawaan soo gaaray magaalada Dhahar, wasiir-kuxigeegnka amniga Puntland, iyo wafdi balaaran uu hogaaminaayo. Wafdigani ayaa waxaa qayb ka ahaa gudoomiyaha Gobolka Haylaan mudane Maxamed Faarax Ciise Jeentaro, taliyaha ciidanka madaxtooyada Puntland, Cumar Faraweyne, agaasimaha la-dagaalanka argagixisada Puntland, taliye Cali-Daahir, taliyaha booliska gobolka Sanaag, Axmed Saciid Maxamed iyo cutubyo katirsan ciidamada gobolka Haylaan